ဒန်နီရစ်ဒါရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီ ယံ ခါးပတ်ကို ပြန်လည် ရယူသွားမယ် လို့ပရိသတ်ကိုကတိပေးလိုက်တဲ့အောင် လအန်ဆန်း – XB Media Myanmar
ယမန်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ONE CHAMPIONSHIP မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းရွှေခါးပတ်လုပွဲမှာတော့ အောင်လတစ်ယောက် နယ်သာလန်နိုင်ငံသားရိုင်နာ ဒီရစ်ဒါ ကိုရှုံးနိမ့်ပြီး လက်ရှိချန်ပီယံ ခါးပ တ် ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် အောင်လရဲ့ရှုံးပွဲကြောင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးက စိတ်မကောင်းဖြ စ် နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပေမယ့် မြန်မာပရိသတိတွေကတော့ အောင်လကို အားမလျော့ဖို့ ဝိုင်းဝန်းအားပေး နေကြတာပါ ဒီလိုအားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အောင်လက သူ့ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန် ပီယံဘွဲ့ ကို ပြန်လည်ရယူသွားမယ်လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
အောင်လက “ကျွန်တော် နေကောင်းကျန်းမာပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုလည်း နေကောင်း ကျန်းမာကြပါတယ်၊ထို့အတူကျွန်တော့်အသင်းကလည်းကျွန်တော့်ကိုနောက်ကွယ်ကနေအ ကော င်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဘုရားသခင်က ကောင်းမြတ်ပါတယ်!ကျွန်တော် အသန်မာ ဆုံး၊ အ ကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြန်လည်ရင်ဆိုင် ထိုးသတ်ပြီးတော့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန် ပီ ယံ ခါးပတ်ကို ပြန်လည်အရယူမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။ဒီတော့ ငိုကြွေးမနေပါနဲ့တော့🙏❤”
“I’m healthy, my family is healthy and I’ve gotagreat team behind me. God is good! We will be back stronger and I will get that middleweight belt back! Mark my words. 🙏🏽❤️ don’t need to cry at all.” ဟု _သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှ တဆင့် အသိပေးလာခဲ့တာပါ
အောင်လကတော့ ဝမ်းနည်းနေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် သူ့ရဲ့ ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ပြန်လည်ရ ယူ သွားမယ်လို့ ကတိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ အောင်လအတွက် အားပေးစ ကားလေးပြောခဲ့ကြပါအုန်းနော်
ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ONE CHAMPIONSHIP မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းေ႐ႊခါး ပတ္ လုပြဲမွာေတာ့ ေအာင္လတစ္ေယာက္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသား႐ိုင္နာ ဒီရစ္ဒါ ကိုရႈံး နိမ့္ ၿပီး လက္ရွိခ်န္ပီယံ ခါးပ တ္ ကို စြန႔္လႊတ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္ ေအာင္လရဲ႕ရႈံးပြဲေၾ ကာင့္ ျမ န္မာတႏိုင္ငံလုံးက စိတ္မေကာင္းျဖ စ္ ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္
ဒီလိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ရေပမယ့္ ျမန္မာပရိသတိေတြကေတာ့ ေအာင္လကို အားမေလ်ာ့ဖို႔ ဝိုင္းဝ န္းအားေပး ေနၾကတာပါ ဒီလိုအားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေအာင္ လက သူ႔ရဲ႕ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းခ်န္ ပီယံဘြဲ႕ ကို ျပန္လည္ရယူသြားမယ္လို႔ ဆိုလာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္
ေအာင္လက “ကြၽန္ေတာ္ ေနေကာင္းက်န္းမာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစု ည္း ေနေကာင္း က်န္းမာၾကပါတယ္၊ထို႔အတူကြၽန္ေ တာ့္အသင္းကလ ည္းကြၽန္ေတာ့္ကိုေနာက္ကြယ္ကေနအ ေကာ င္းဆုံးေထာက္ပံ့ေပးပါ တယ္။ဘုရားသ ခင္က ေကာင္းျမတ္ပါတယ္!ကြၽန္ေတာ္ အသန္မာ ဆုံး၊ အ ေကာင္းဆုံးပုံစံနဲ႔ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ ထိုးသတ္ၿပီးေတာ့ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ခ်န္ ပီ ယံ ခါးပတ္ကို ျ ပန္လည္အရယူမယ္လို႔ ကတိေပးပါတယ္။ဒီေတာ့ ငိုေႂကြးမေနပါနဲ႔ေတာ့🙏❤”
“I’m healthy, my family is healthy and I’ve gotagreat team behind me. God is good! We will be back stronger and I will get that middleweight belt back! Mark my words. 🙏🏽❤️ don’t need to cry at all.” ဟု _သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ် က္ႏွာ မွ တဆင့္ အသိေပးလာခဲ့တာပါ
ေအာင္လကေတာ့ ဝမ္းနည္းေနၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ ခ်န္ပီယံခါး ပတ္ကို ျပန္လည္ရ ယူ သြားမယ္လို႔ ကတိေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရေအာ င္လအတြက္ အားေပးစ ကားေလးေျပာခဲ့ၾကပါအုန္းေနာ္
နာမည်ကျော် MRTV4Presenter ကိုဇင်မောင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ယနေ့ကွယ်လွန်